Nagu saabsan – Xidig Organisation
AR NL EN SO SV
العربية Nederlands English Afsoomaali Svenska
Xiddig Organisation waxaa loo aasaasay inuu wax ka badalo xaaladda dhalinyarada Soomaaliyeed, oo ah tirada ugu badan ee bulshada. Waxaa lagu qiyaasaa in ilaa 75% bulshada Soomaaliyeed ay yihiin dhalinyaro.
Ururka xiddig waxa uu aanminsan yahay in horumarka dalka ay dhallinyaradu muhiim u tahay. Sidaas darteed waxaa ururka xiddig uu ka shaqeeynayaa sidii uu kaalinta dhallinyarda Soomaaliyeed kor ugu qaadi lahaa. Hadafka Xidig Organisation waa in la soo saaro: “Dhalinyaro horumarsan oo ka dhex iftiimaya bulshada”
Sida loo heli lahaa urur ay ku mideysan yihiin dhalinyarada si loo mideeyo awoodooda waxqabad.
Dejinta Hadafyada,himilooyinka Xiddig Organisation & Isku keenidda guddiga ururka ee wadan walba.
Fulinta qorshayaasha sanadlaha ee wadan walba iyo Billowga shaqooyinka Xiddig Organisation.
“In aan taageerno Dhalinyarada Somaliyeed si aan ugu gudubno caqabadaha iyo in aan noqono Dhalinyaro fikirkooda sareeeya oo oo ay aqoontu hagto, lana-jaanqaadi karta horumarka xadaarada ku dhisan ee dunidda”
Himilooyinkayna - our Mission
© 2022, Xidig Organisation All Rights Reserved.
Made with by Creative Corner